Ikhaya elikhethekileyo eReserva Conchal ePlaya Conchal
Indlu ekhethekileyo eReserva Conchal ePlaya Conchal. Ifakwe kolona lwandle luhle kwaye lukhethekileyo lwesanti emhlophe eCosta Rica. Uyakonwabela iimbono ezimangalisayo zangasemva kwendlu, ichibi, i-jacuzzi, ikhitshi enkulu nexhotyiswe ngokupheleleyo, i-AC, umoya wokuphumla, isixhobo se-Alexa, izithethi ezingenazingcingo, njl.
Indawo yaseReserva Conchal gated ikunikeza ukufikelela kwiConchal Beach, ukufikelela kwiKlabhu yaseBeach yabucala, indawo zokutyela, indawo yokuzivocavoca, iikhosi zegalufa, iindlela zangaphandle kumbindi wehlathi, phakathi kwabanye.
Ikhitshi leGourmet elinezixhobo zokubala zegranite nazo zonke izixhobo zentsimbi engatyiwa, kubandakanya imicrowave, isitya sokuhlamba izitya, uluhlu lombane olunehood kunye neoveni, ioveni yetoaster, umenzi wekofu, ifriji esecaleni komkhenkce namanzi emnyango kunye nazo zonke izixhobo zokupheka. kunye ne-dishware oya kuyidinga ngexesha lokuhlala kwakho. Kunye neendawo zeBBQ ezixhotyiswe ngokupheleleyo kwi-terrace.
-Inkonzo ye-Concierge xa ufika kwaye ngexesha lokuhlala kwakho.
-Iinkonzo zokugcina izindlu
-Inkonzo ye-shuttle yamahhala ukusuka kwindlu ukuya elunxwemeni (i-5 min drive).
-Ukufikelela simahla kwiklabhu yaselwandle, indawo yokuzivocavoca kunye nesauna.
-Uqhagamshelo lwe-WIFI yasimahla kuyo yonke indlu
-Indawo yokuhlamba impahla endlwini ene washer epheleleyo kunye nesomisi
-Indawo yokupaka yangaphakathi ukuya kwiimoto ezi-2 kunye neendawo zokupaka ngaphandle ukuya kwiimoto ezi-3.
Yonwabela ukufikelela ngokupheleleyo kwiKlabhu yaseLwandle apho unokonwabela indawo yokutyela, ichibi elikhulu elijonge iPlaya Conchal entle, iSpa, iGym, kunye nePlaya Conchal.
Ekufikeni kwakho e-Reserva Conchal uya kwamkelwa yinkonzo ye-concierge eyeyakho eya kukunika ukhenketho olukhokhelweyo malunga ne-Reserva Conchal.